Numeri 19 | IBhayibhile Kwi-Intanethi | INguqulelo Yehlabathi Elitsha
19 Waqhubeka ethetha uYehova kuMoses nakuAron, esithi: 2 “Nguwo lo ummiselo womthetho awuyaleleyo uYehova, esithi, ‘Thetha koonyana bakaSirayeli, bakuzisele imazi yenkomo ebomvu ephilileyo, engenasiphene,+ ekungabekwanga dyokhwe kuyo.+ 3 Nize niyinike uEleyazare umbingeleli, ayise ngaphandle kwenkampu, ixhelelwe phambi kwakhe. 4 UEleyazare umbingeleli umele athi nkxu umnwe egazini layo aze afefe inxalenye yegazi layo ngaphambi kwentente yokuhlangana izihlandlo ezisixhenxe.+ 5 Yothi ke itshiswe imazi yenkomo leyo phambi kwamehlo akhe. Siya kutshiswa isikhumba sayo nenyama yayo negazi layo kunye nomswane wayo.+ 6 Ke yena umbingeleli uya kuthabatha umsedare+ nehisope+ nomchako omfusa+ aze aziphose ezo zinto phezu kwaloo mazi yenkomo itshiswayo. 7 Umele ke umbingeleli ahlambe izambatho zakhe, ahlambe nomzimba wakhe ngamanzi, yaye emva koko angangena enkampini; kodwa loo mbingeleli uya kuba ngongahlambulukanga kude kuhlwe. 8 “‘Lowo uyitshisileyo makazihlambe izambatho zakhe ngamanzi,+ ahlambe nomzimba wakhe ngamanzi, abe ngongahlambulukanga kude kuhlwe. 9 “‘Uthuthu+ lwale mazi yenkomo maluwolwe yindoda ehlambulukileyo ize ilubeke ngaphandle kwenkampu endaweni ehlambulukileyo; yaye lumele lusetyenziswe yindibano yoonyana bakaSirayeli, lugcinelwe amanzi okuhlambulula.+ Ngumnikelo wesono ke lowo. 10 Lowo uluwolayo uthuthu lwaloo mazi yenkomo umele ahlambe izambatho zakhe aze abe ngongahlambulukanga kude kuhlwe.+ “‘Kumele oko kube ngummiselo wexesha elingenammiselo+ koonyana bakaSirayeli nakumphambukeli ophambukele phakathi kwabo. 11 Nabani na ochukumisa isidumbu sawo nawuphi na umphefumlo womntu+ woba ngongahlambulukanga iintsuku ezisixhenxe.+ 12 Ngoko ke kofuneka azisulungekise ngosuku lwesithathu, aze ahlambuluke ngosuku lwesixhenxe. Kodwa ukuba akazisulungekisanga ngosuku lwesithathu,+ akayi kuhlambuluka ngosuku lwesixhenxe. 13 Wonk’ ubani ochukumisa isidumbu, umphefumlo wakhe nawuphi na umntu ofileyo, aze angazisulungekisi, uwenze inqambi umnquba kaYehova,+ ngoko umele unqunyulwe ungabikho kwaSirayeli+ loo mphefumlo. Ngenxa yokuba ungafefwanga ngamanzi okuhlambulula,+ uya kuqhubeka ungahlambulukanga. Ukungahlambuluki kwawo kusekuwo.+ 14 “‘Nguwo lo umthetho xa athe umntu wafela ententeni: Wonk’ ubani ongena kuloo ntente, naye wonk’ ubani osukuba ekuloo ntente, uya kuba ngongahlambulukanga iintsuku ezisixhenxe. 15 Sonke isitya esivulekileyo+ esingenasiciko sibotshiweyo soba sesingahlambulukanga. 16 Wonk’ ubani omchukumisayo endle obulewe ngekrele+ nokuba sisidumbu nokuba lithambo+ lomntu nokuba lingcwaba uya kuba ngongahlambulukanga iintsuku ezisixhenxe. 17 Yaye bamele bamcaphulele lowo ungahlambulukanga eluthulini ekutshiselwe kulo umnikelo wesono kuze kubekwe phezu kwalo amanzi aqukuqelayo ngesitya. 18 Uya kuthi ke umntu ohlambulukileyo+ athabathe ihisope,+ ayithi nkxu emanzini, atshize intente kwanezitya nemiphefumlo yonke ebikuyo kwanalowo uchukumise ithambo nokuba ngobuleweyo nokuba sisidumbu nokuba lingcwaba. 19 Yaye umntu lowo uhlambulukileyo umele atshize lowo ungahlambulukanga ngosuku lwesithathu nangosuku lwesixhenxe, amsulungekise ke esonweni ngosuku lwesixhenxe;+ yaye umele ahlambe izambatho zakhe, ahlambe nomzimba ngamanzi, aze ke ahlambuluke ngokuhlwa. 20 “‘Kodwa umntu ongahlambulukanga aze angazisulungekisi, loo mphefumlo umele unqunyulwe+ ungabikho phakathi kwalo ibandla, ngokuba uyenze inqambi ingcwele kaYehova. Awufefwanga ngamanzi okuhlambulula. Awuhlambulukanga. 21 “‘Yoba ngummiselo wexesha elingenammiselo lowo kubo, okokuba otshiza ngamanzi okuhlambulula ufanele ahlambe izambatho zakhe,+ kwanalowo uchukumisa amanzi okuhlambulula. Uya kuba ngongahlambulukanga kude kuhlwe. 22 Kwaye nantoni na asukuba eyichukumisa lowo ungahlambulukanga yoba yengahlambulukanga,+ nomphefumlo oyichukumisayo woba ngongahlambulukanga kude kuhlwe.’”+